ပန်ဒိုရာ: အပြောင်းအလဲသို့ တိုးအ၀င်
အီဖေစကိုယ်တော့ အလုပ်ထဲမှာ အာရုံလွင့်နေတာကြပြီ (သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီ…ဟီး)။ အခုထိ အာရုံ စုစည်းလို့မရသေး။
မပန်ကြီး ... နိုးပလုံပလုံ ...
ဇော်ဂျီကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်၊ ပြီး ရင် ကလစ် ၂ ချက် နှိပ်ပြီး ဖွင့်ထားလိုက်။ ဒါဆိုရင် မီးမြေခွေးထဲမှာ ဇော်ဂျီနဲ့မြင်ရပြီ။ အင်စတောလုပ်စရာမလိုဘူး။ စမ်းကြည့်ကြည့်
မနိုပါနဲ့ chaos ရေ
ကိုပေါရေ ဒီလိုလုပ်အားတွေနဲ့ ချင်ကာပူကြီး တိုးတက်နေတာလေ (နောက်တာပါ. တကယ်အလုပ် ကြိုးစားတာ အဟီး)
ငစနေ.. ကျေးဇူးပဲ ဖတ်လို့တော့ ရသွားပြီ.. ဟေးး
2007 Job market is very hot in Singapore and many people change the job. Best of Luck. My sister introduced me with your blog and I read many of yours at once. Yeah, you are really an brilliant writer.